हातका यी ७ रेखा हेरेरै आफ्नो भाग्य आफै थाहा पाउन सकिन्छ, कतै तपाईको हातमा पनि त्यस्तै रेखा त छैन? – Paluwa Khabar
अषोज ११, २०७८ सोमबार 29
भनिन्छ, ‘हत्केला नहुनेहरुको पनि आफ्नै भाग्य हुन्छ ।’ वास्तवमा हो पनि, सबै आआफ्नै तरिकाले बाँचीरहेका हुन्छन् । हुनत मानिसले कर्म अनुसारकै फल पाउने हो । काम अनुसारको दाम अर्थात उसले गरेका कार्यहरुको आधारमा जिन्दगीको बिगत, वर्तमान र भविष्य निर्धारण हुने हो । तर पनि यहाँ ज्योतिष विज्ञानलाई पनि महत्वपूर्ण रुपमा हेर्ने गरिन्छ । सोही ज्योतिष विज्ञानका अनुसार भनिएका कतिपय तथ्यहरु मिल्ने गरेको समेत बताइन्छ । हात हेरेर भविष्य बताउने ज्योतिषको बारेमा थाहा भएपनि उनी के आधारमा भविष्य निर्धारण गरीरहेका छन् भन्ने जानकारी नहुदा ज्योतिषको भविष्यवाणी या वर्तमान र बिगत झल्काउदा हामी आश्चर्यचकित पछौँ । तर, ज्योतीष विज्ञान अनुसार केही टिप्सहरुबारे साधारण जानकारी लिन सके हामी स्वयंले आफ्नो भविष्यबारे थाहा पाउन सक्ने सम्भावना रहन्छ । हाम्रो हातमा रहेका कयौँ रेखाहरु छन् । ती रेखाहरुको आआफ्नै अर्थ रहन्छ । अतः कुन रेखाको अर्थ के हुन्छ ? यहाँ केही टिप्सहरु प्रस्तुत गरिएका छन् :
१, भाग्य रेखा
– यो रेखाको आफ्नै अर्थ छ । जस्तो कि सधै एकतासले सीधा सक्लो भएर गएको छ भने तपाईको भाग्य एकदमै राम्रो मानिन्छ । तर, यो रेखा बीच बीचमा टुटेको हुनु अथवा पातलो छ भने तपाईको भाग्य खासै गतिलो छैन भन्ने बुझीन्छ । यो रेखा क्लीयर नभएकाहरुले जीवनमा धेरै समस्या, झमेलाहरुको सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ । तर, यो रेखाले तपाईको औंलाबाट सुरु भएर जीवन रेखासम्म सर्लक्कै छोएको छ भने तपाईलाई परिवार, सन्तान, आफन्त, नातागोता र साथीहरुबाट सधैं सुखभोग गर्ने अवसरहरु प्राप्त भइरहने योग रहन्छ ।
२, जीवन रेखा
– बुढी औला र भाग्यरेखा बीच एउटा अर्को रेखा हुन्छ । त्यसैलाई जीवन रेखा भनिन्छ । यो तपाईको हातमा हुने महत्वपूर्ण रेखा हो । जसमा तपाईको जीवन र जीवनमा हुने महत्वपूर्ण घटनाको रहस्य लुकेको हुन्छ । यदी यो रेखा गहिरो र लामो छ भने तपाईको स्वास्थ्य राम्रो हुने छ । यदी यो रेखा पातलो र छोटो छ भने जीवनमा अनेक कष्ट र दुःख सहनुपर्ने हुन्छ ।
२, हृदय रेखा
– हृदय रेखामा तपाईको प्रेम तथा नाता–सम्बन्धसँग जोडिएका कैयौं रहस्य लुकेका हुन्छन् । यदि तपाई कुनै व्यक्तिको बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ कि, त्यो व्यक्ति भावुक छ या छैन भनेर रु तपाई उसको हातमा भएको हृदय रेखा हेरर अन्दाज लगाउन सक्नुहुन्छ । हातको पञ्जामा रहेको हृदय रेखा सिधा र छोटो छ भने त्यस्तो व्यक्ति शब्दले वर्णन गरे भन्दा काम गरेर प्रेम दर्साउँछन् । यदि कुनै व्यक्तिको हातको यो रेखा मोडिएको छ भने त्यो व्यक्तिको इच्छा धेरै प्रबल हुन्छ ।
३, सूर्य रेखा
– हातमा हुने धेरै रेखाहरुमध्ये यो रेखाको बारेमा कतिपयलाई यसबारे जानकारी नै हुँदैन । यो रेखा तपाईको हातको पञ्जामा ठाडो रुपमा कोरिएको हुन्छ । जसबाट थाहा हुन्छ कि, कुनै व्यक्ति कति रचनात्मक हुन्छ । साथै कुनै व्यक्तिमा कति आत्मविश्वास र योग्यता छ भन्ने अनुमान पनि यो रेखाबाट गरिन्छ । धेरैजसो मानिसहरुमा यो रेखा भेटिन्दैन ।
४ छोटा र पातला रेखा
– धेरै व्यक्तिका हातमा छोटा र पातला धेरै रेखा हुन्छन् । यस्ता व्यक्ति धेरै संवेदनशील मानिन्छन् । साथै समय आउँदा यस्ता व्यक्ति सही र गलतको बीचमा फरक छुट्याउने क्रममा दोधारेपन देखिन्छ । अर्थात उनीहरुका लागि कुनै पनि विषयगत निर्णय लिनु फलामको चिउरा चपाएजस्तै हुनेगर्दछ ।
५, हातमा धेरै कम रेखा हुनु
– जसको हत्केलामा थोरै मात्र रेखाहरु छन् यस्ता व्यक्ति आफ्नो बचनको पक्का हुने विश्वास गरिन्छ । हातमा कम रेखा हुने व्यक्ति निकै जिद्दी स्वभावका भएपनि एकपटक गरेको निर्णय कहिल्यै कसैका लागि बदलिँदैनन् । हरेक कुरामा अडिग रहन्छन् । यस्ता व्यक्तिसँगको सम्बन्ध निकै सम्बेदनशील मानिन्छ ।
– हृदयरेखा र जीवनरेखा बीच भाग हुदै भाग्य रेखासँग क्रस हुने रेखा नै मस्तिष्क रेखा हो । यसलाई कुनै व्यक्तिको ज्ञान तथा विवेक मापन गर्ने रेखाको रुपमा पनि लिइन्छ । यही रेखा हेरेर ज्योतीषले बौदिकताको चर्चा गर्ने गरेको पाइन्छ । साथै यही रेखाको माध्यमबाट तपाईको मनोविज्ञानबारे पनि जानकारी हासिल हुन्छ । यदी यो रेखा छोटो छ भने कुनै विषयमा निर्णय लिदा पर्याप्त सोचबिचारै नगरी फ्याट्ट निर्णय लिने व्यक्तिको रुपमा चिन्नुपर्छ भने यो रेखा लामो हुनेहरुलाई भने कुनै विषयमा गहिराईसम्म अध्ययन गरेर पूर्ण तथ्य बुझेरमात्र निर्णय वा आफ्नो राय दिने व्यक्तिको रुपमा चित्रित गरिन्छ । समग्रमा यो रेखा लामो हुनलाई तीक्ष्ण बौदिकता मानिन्छ ।
Prevहातका यी ७ रेखा हेरेरै आफ्नो भाग्य आफै थाहा पाउन सकिन्छ, कतै तपाईको हातमा ओअनि त्यस्रै रेखा त छैन?
Nextश्रीमान् एक छिन पिसाब फेर्न जाँदा धनुषाकी संगीता बस स्टेन्डबाटै गायब !
बढ्याे काेराेनाकाे जाेखिम दैनिक एक लाख संक्रमित थपिदै
काठमाडौंबाट जनकपुरतर्फ उडेको जहाज पोखरा पुगेर दु’ र्घटना हुँदा यति धेरैको भयो मृ’ त्यु
उत्तराखण्डमा हिमनदी फु’ट्दा ज्यान गु’माउने १० नेपाली म’जदुरको पहिचान, (नाम सहित)
घरमा बहिनीको बिवाह अस्पतालमा दाइको मृत्यु, बिवाह नारोकियोस भनेर आमाले लुकाइन मृत्युको खबर, सहिन एक्लै पिडा
एक्कासी फेरी लकडाउन हुने मिती तोकियो, यति गतेबाट पुन देशमा लकडाउन सुरू हुँदै (520)
भर्खरै बिमान दु’ र्घटना हुँदा प्रधानमन्त्री सहित ११ जनाको मु’ त्यु , मनमा माया भए RIP लेख्नुहोला (314)
पर्यटनमन्त्रीमा प्रेम आले (266)
१.	खसी काट्ने बिबादमा बुवाले आफ्नै छोराको घाँटी का’टे (60)
२.	आधा घण्टा अघि यस्तो तस्बिर राखेकी डा. दीपाको भयो दु’खद् नि’धन (भिडियो हेर्नुस्) (54)
७.	भारतिय कोच भन्छन् : ‘साफ च्याम्पियनसिप नेपालले नै जित्छ’ (42)
८.	राजा ज्ञानेन्द्रलाई भट्टराईको धम्की : देशको आलिकती माया भए चुप लागेर गणतन्त्र स्वीकार्नु ( सहि वा गलत ) (42)